Akhriso: Guddigii doorashoyinka Puntland oo Maanta sirasmi ah isku casilay – War La Helaa Talo La Helaa
Akhriso: Guddigii doorashoyinka Puntland oo Maanta sirasmi ah isku casilay
By Xuseen Madoobe	 Last updated Jun 27, 2019
Waxaa gebi ahaanba Maanta ku dhawaaqay inay is-wada casileen Xubnaha guddiga doorashooyinka ku meel gaark ah ee Puntland,kadib kulan ay Maanta ku yeesheen Magalada Garoowe.
Shir jaraa’id oo Warbaahinta ay u qabteen is casilaadooda kadib ayay ku sheegeen sababaha ay isku casileen duruufo gaar ah oo la soo darsay,isla markaana qaarkood ay horay u qaateen go’aanka is casilaada ah.
Xubnaha Guddiga guddiga doorashooyinka ku meel gaark ah ee Puntland ee Maanats dia rasmiga ah ugu dhawaaqay is casilaada ayaa maalma ka hor waxaa ay shir la yeesheen Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni, iyaga oo u gudbiyay cabashada ay qabaan ee keeneysa inay is casilaan.
Madaxweynaha Dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa la filayaa in uu soo Magacaabo 5 -ta xubnood ee u horreysa guddiga cusub, halka 4-ta kale ay soo magacaabi doonaan golaha wakiilada Maamulkaasi Puntland.,waxaana dhamaantooda Guddiga ay noqonayaan 9 Xubnood.
Guddiga Cusub ee la soo Magacaabi doono ayaa sii wadi doona , geeddi-socodka hirgelinta hannaanka xisbiyada badan ee Puntland, iyada oo xukuumadda Cuusb ee Puntland ay horay u sheegtay in la dardar gelin doono si looga gudbo nidaamka qabaa’ilka oo Puntland wax ku qeybsato.
Hoos Ka Akhriso Is casilaada ah ee guddiga Doorashooyinka Puntland.
DEG DEG+FIIRSO: Wararkii ugu dambeeyay ee Muqdisho & Guud ahaan Soomaaliya
Somaliland: Xukun lagu riday Mas’uul lagu eedeeyey Aflagaadeynta Muuse Biixi